“ ဟေ့ ကိုရှကြေား ကွညျ့စမျးပါဦး မွကျတှကေ ပွာလဲ့နတောပဲဗြို့ ”
ကိုမွညျးကွီးက ပွောရာ ကိုဖိုးရှကြေားကလညျး
“ ဟာ ကိုမွညျးကွီးရာ ခငျဗြားကတော့ နောကျပွီဗြာ။ သခြောကွညျ့စမျးပါဦး အစိမျးရောငျတှပေါဗြ ၊ ဗရမျးဗတာတှေ လြှောကျပွောမနစေမျးပါနဲ့ ကိုမွညျးကွီးရာ ”
“ မဟုတျဘူး ကိုရှကြေား ခငျဗြားကသာ သခြောမကွညျ့တာဗြ။ မွကျတှကေ အပွာရောငျမှ အပွာရောငျဗြ။ ပွာလဲ့နတောဘဲ ”
“ မဟုတျဘူး အစိမျးရောငျကှ ”
“ အပွာရောငျကှ ”
ဒီလိုနဲ့ ကိုရှကြေားနဲ့ ကိုမွညျးကွီးတို့နှဈယောကျ အပွိုငျငွငျးကွရာ အဆုံး၌ ဘယျသူမှားတယျ မှနျတယျ ဆိုတာ ဆုံးဖွတျရနျ ကသေရာဇာ ခွင်ျသမေ့ငျးကွီးထံ သို့ သှားလေးသညျ။ ကသေရာမငျးကွီးထံသို့ ရောကျသျော ကိုမွညျးကွီးက
“ အရှငျမငျးကွီး မွကျက အပွာရောငျအဆငျး ရှိသညျ မဟုတျပါလားဘုရား? ထိုအခငျြးအရာကို ကိုရှကြေားက အစိမျးရောငျရှိတယျလို့ ငွငျးခုနျနပေါတယျ ဘုရား။ အရှငျမငျးကွီး ကနြျောမြိုးတို့ ပွဿနာရပျကို ဖွရှေငျးပေးတျောမူပါ ”
“ အသငျမွညျးပွောသညျမှာ မှနျပစှေ။ မွကျသညျ အပွာရောငျ ရှိ၏ ”
ထို့နောကျ ကိုရှကြေားကို အပွဈပေး၏။ အပွဈပေးပွီးနောကျ
“ ကိုရှကြေား ကြုပျပွောတယျမလား၊ မွကျဆိုတာ အပွာရောငျ။ အခုတော့ ဘယျ့နှယျ့လဲ ခငျဗြားအမှားကို လကျခံပွီမလား ” ပွောရငျး ကသေရာမငျးကွီးကို နှုတျဆကျကာ အလှနျပြျောရှငျစှာ ခုနျပေါကျ ထှကျခှာလတေော့သညျ။ ကိုရှကြေားက မကနြေပျ၍
“ အရှငျမငျးကွီး မွကျဆိုတာ အစိမျးရောငျ ရှိရကျနဲ့ အဘယျ့ကွောငျ့ ကနြျောမြိုးကို အပွဈပေးတျော မူရသနညျး ဘုရား ”
“ အသငျ့လို ရဲံရငျပွီး ထကျမွကျတဲ့ ကြားတကောငျက မွညျးလို ဉာဏျနညျးတဲ့ကောငျနဲ့ အဓိပ်ပာယျမရှိတဲ့ မေးခှနျးတခုအတှကျ ငွငျးခုနျပွီး အခြိနျဖွုနျးနတေယျ့ အတှကျကွောငျ့ ငါကိုယျတျောမွတျ အပွဈပေးရခွငျး ဖွဈတယျ။ နောကျဘယျတော့မှ ဉာဏျတိမျတဲ့ သူတှနေဲ့ ဘယျတော့မှ အငွငျးခုနျ မလုပျပါနဲ့တော့ ”
ပုံပွငျလေးကတော့ ရှငျးရှငျးလေးပါဘဲ။ ဉာဏျတိမျနတေဲ့သူတှနေဲ့ ပွိုငျငွငျးနမေယျဆို မငျးရဲ့အခြိနျတှေ ကုနျမယျ အကြိုးမရှိဘဲဖွဈမယျ။
မငျးပါ ဉာဏျတိမျတဲ့သူ ဖွဈသှားမယျ။ ကိုယျ့တနျဖိုးကို ဟိုခြောကျထဲထိ ဆှဲခသြလို ဖွဈသှားလိမျ့မယျ။
အရူးတှနေဲ့ ပွိုငျမငွငျးဖို့ သူတို့ ဘယျလိုဆုံးမခဲ့ကွလဲဆိုတော့...
“ It is better to keep your mouth closed and let people think you areafool than to open it and remove all doubt. ”
“ သူတို့ကို ကိုယျမှနျကွောငျး ပွနျရှငျးပွမနပေါနဲ့။ ကိုယျ့ကို ဉာဏျတိမျတဲ့သူ၊ အရူးလို့ခံယူပွီး နှုတျဆိတျနလေိုကျပါ။ ” Mark Twain (ကမ်ဘာကြျောစာရေးဆရာ)
“ Arguing withafool only proves that there are two. ”
“ ဉာဏျတိမျတဲ့လူနဲ့ ငွငျးခုနျနခွေငျးဟာ ဉာဏျတိမျတဲ့သူ နှဈယောကျ ရှိကွောငျး သကျသပွေလိုကျခွငျးဖွဈတယျ။ ” ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား
သငျခနျးစာယူပါ။ ပညာရှိတှရေဲ့စကားကို လိုကျနာပွီး အရူးတှနေဲ့ ပွိုငျငွငျးမနပေါနဲ့တော့။ ဉာဏျတိမျတဲ့ အရူးတှနေဲ့ ပွိုငျငွငျးနမေယျ့အစား တိတျတိတျသာ နလေိုကျပါတော့..
“ ဟေ့ ကိုရွှေကျား ကြည့်စမ်းပါဦး မြက်တွေက ပြာလဲ့နေတာပဲဗျို့ ”
ကိုမြည်းကြီးက ပြောရာ ကိုဖိုးရွှေကျားကလည်း
“ ဟာ ကိုမြည်းကြီးရာ ခင်ဗျားကတော့ နောက်ပြီဗျာ။ သေချာကြည့်စမ်းပါဦး အစိမ်းရောင်တွေပါဗျ ၊ ဗရမ်းဗတာတွေ လျှောက်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ ကိုမြည်းကြီးရာ ”
“ မဟုတ်ဘူး ကိုရွှေကျား ခင်ဗျားကသာ သေချာမကြည့်တာဗျ။ မြက်တွေက အပြာရောင်မှ အပြာရောင်ဗျ။ ပြာလဲ့နေတာဘဲ ”
“ မဟုတ်ဘူး အစိမ်းရောင်ကွ ”
“ အပြာရောင်ကွ ”
ဒီလိုနဲ့ ကိုရွှေကျားနဲ့ ကိုမြည်းကြီးတို့နှစ်ယောက် အပြိုင်ငြင်းကြရာ အဆုံး၌ ဘယ်သူမှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရန် ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်းကြီးထံ သို့ သွားလေးသည်။ ကေသရာမင်းကြီးထံသို့ရောက်သော် ကိုမြည်းကြီးက
“ အရှင်မင်းကြီး မြက်က အပြာရောင်အဆင်း ရှိသည် မဟုတ်ပါလားဘုရား? ထိုအချင်းအရာကို ကိုရွှေကျားက အစိမ်းရောင်ရှိတယ်လို့ ငြင်းခုန်နေပါတယ်ဘုရား။ အရှင်မင်းကြီး ကျနော်မျိုးတို့ ပြဿနာရပ်ကို ဖြေရှင်းပေးတော်မူပါ ”
“ အသင်မြည်းပြောသည်မှာ မှန်ပေစွ။ မြက်သည် အပြာရောင် ရှိ၏ ”
ထို့နောက် ကိုရွှေကျားကို အပြစ်ပေး၏။ အပြစ်ပေးပြီးနောက်
“ ကိုရွှေကျား ကျုပ်ပြောတယ်မလား၊ မြက်ဆိုတာ အပြာရောင်။ အခုတော့ ဘယ့်နှယ့်လဲ ခင်ဗျားအမှားကို လက်ခံပြီမလား ” ပြောရင်း ကေသရာမင်းကြီးကို နှုတ်ဆက်ကာ အလွန်ပျော်ရွှင်စွာ ခုန်ပေါက် ထွက်ခွာလေတော့သည်။ ကိုရွှေကျားက မကျေနပ်၍
“ အရှင်မင်းကြီး မြက်ဆိုတာ အစိမ်းရောင် ရှိရက်နဲ့ အဘယ့်ကြောင့် ကျနော်မျိုးကို အပြစ်ပေးတော် မူရသနည်း ဘုရား ”
“ အသင့်လို ရဲံရင်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ကျားတကောင်က မြည်းလို ဉာဏ်နည်းတဲ့ကောင်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ မေးခွန်းတခုအတွက် ငြင်းခုန်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေတယ့် အတွက်ကြောင့် ငါကိုယ်တော်မြတ် အပြစ်ပေးရခြင်း ဖြစ်တယ်။ နောက်ဘယ်တော့မှ ဉာဏ်တိမ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ အငြင်းခုန် မလုပ်ပါနဲ့တော့ ”
ပုံပြင်လေးကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါဘဲ။ ဉာဏ်တိမ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ပြိုင်ငြင်းနေမယ်ဆို မင်းရဲ့အချိန်တွေ ကုန်မယ် အကျိုးမရှိဘဲဖြစ်မယ်။
မင်းပါ ဉာဏ်တိမ်တဲ့သူ ဖြစ်သွားမယ်။ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ဟိုချောက်ထဲထိ ဆွဲချသလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အရူးတွေနဲ့ ပြိုင်မငြင်းဖို့ သူတို့ ဘယ်လိုဆုံးမခဲ့ကြလဲဆိုတော့...
“ သူတို့ကို ကိုယ်မှန်ကြောင်း ပြန်ရှင်းပြမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်ကို ဉာဏ်တိမ်တဲ့သူ၊ အရူးလို့ခံယူပြီး နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်ပါ။ ” Mark Twain (ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ)
“ ဉာဏ်တိမ်တဲ့လူနဲ့ ငြင်းခုန်နေခြင်းဟာ ဉာဏ်တိမ်တဲ့သူ နှစ်ယောက် ရှိကြောင်း သက်သေပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ” ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား
သင်ခန်းစာယူပါ။ ပညာရှိတွေရဲ့စကားကို လိုက်နာပြီး အရူးတွေနဲ့ ပြိုင်ငြင်းမနေပါနဲ့တော့။ ဉာဏ်တိမ်တဲ့ အရူးတွေနဲ့ ပြိုင်ငြင်းနေမယ့်အစား တိတ်တိတ်သာ နေလိုက်ပါတော့